Masar: Mursi oo lagu xukumay dil toogasho ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Masar: Mursi oo lagu xukumay dil toogasho ah
A warsame 16 May 2015 16 May 2015
Mareeg.com: Maxkamad ku taala dalka Masar ayaa xukun dil ah ku ridday madaxwaynihii hore ee Masar Maxamad Mursi, kaasoo sanadkii 2013 milateriga dalkaa afgembi xukunka uga tuureen.
Maxkamadda ayaa sheegtay in xukunkaas loogu fuliyay kaalintii uu ku lahaa maxaabiis xabsi laga siidaayay sanakiid 2011.
Maxkamad ku taalla isla dalka Masar ayaa horay Dr. Mursi ugu xukuntay 20 sano oo xabsi ah, iyadoo lagu eedeey in uu amray in la xiro oo la jir dilo mudaaharaadayaal intii uu xilka hayay.
Sidoo kale, waxaa maanta dil toogasho ah lagu xukumay 16 ka mid ah hogaamiyaasha Akhwaanul Muslimiin, kuwaasoo lagu eedeeyey iney jawaasiis yihiin. Ururka Ikhwaanul muslimiin ayaa go’aanaka maxkamadda ku tilmaamay wax lagu qoslo.
Mursi waxaa xilka ka tuuray millitariga bishii 7 ee sanadkii 2013-kii, arrintaas oo dabo socotay mudaaharaadyo balaarnaa oo lagaga soo horjeeday xukunkiisa.